Chrome Kicheni Inodzika Faucet Ine Dhonza-Kunze Sprayer
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Chrome Kicheni Sink Faucet Ine Dhonza-Kunze Sprayer
WOWOW Chrome Kicheni Sink Faucet Ne Pull-Out Sprayer
Rated 4.95 Kunze kwe5 yakavakirwa 37 kasitoma ratings
(37 kasitoma wongororo)
Tenga Kicheni Faucet Imwe Handle ine otomatiki yekudzosera basa. Basa rekudzoreredza faucet yekudhonza inonyanya kuwanikwa nebhora rinokwevera pasi (inozivikanwawo seyegiravhari uye nyundo yemagetsi).
2310800C yekuraira mirairo
Dhonza pasi mukicheni musanganiswa wapombi 2310800C
Kutsvaga classical chrome kudhira pasi kiyi musanganiswa tap? Tsvaga kwete kumberi! WOWOW inokupa iwe yakanakisa classical uye zvakadaro yemazuva ano dhiraina kicheni musanganisi taputa iwe uchawana mumusika. Kukosha kwayo kwemari hakuvhenekerwi, sezvo WOWOW ichiziva nzira yekugadzira yepamusoro michina yekusanganisa kombi pamutengo unodhura. Kunze kwezvo, dhizaini yayo yakasarudzika inoita kuti WOWOW idonhedze mukicheni musanganiswa anotora ziso-inobata mukicheni chero. Paunenge wasarudza yekumhando yekicheni kicheni dhizaini, kana yemazuva ano kicheni dhizaini, iyi yekudonha pasi kicheni mixer tap inokodzera chaimo mairi.
Nguva imwe neimwe iyo vagadziri veWOWOW vanogadzira kugadzira kudhira pasi tapombi yekusanganisa inokatyamadza vanhu vazhinji. WOWOW inongoda kurongedza maziso-ekubata mukicheni musanganiswa matepi anoita mutsauko mune chero kicheni. Vamwe vanhu vanorerutsa mashandisiro emitepisi yekusanganisa yekitchen, sezvo vachiita mutsauko wakakura mukicheni chero ipi. Kicheni mixer tapu inogona kuwedzera yakakosha kubata kune chero kicheni. Vagadziri paWOWOW vanoziva zvakanyanya izvi. Kwete pasina chinhu dhiraini yekumusoro yekusanganisa yemapombi eWOWOW inotengeswa kune vatengi vanobva pasi rese.
Inoshanda dhonza pasi mukicheni mixer tap
Iyo yekudonha pasi kicheni mixer tapu yeWOWOW inoratidza mukana wekuti mvura hose inogona kubviswa nyore nyore kubva mukicheni musanganiswa tap. Izvi zvinowanzo wedzera nzvimbo yako yekushambadzira neimwe 15 kusvika 23 inches. Iyo mvura inodzoreredzwa hose inogona kuburitswa kunze, kuti iwedzere nzvimbo yako yekushambidza zvinoshamisa. Kona yega yega yekicheni yako inonyura, izvo zvisati zvanyanya kuoma kusvika necicic yako yekusanganisa kicheni, ikozvino inogona kucheneswa nyore. Iyo hose yemvura inogona kuburitswa zviri nyore uye mushure mekushandiswa kwayo, inodzosera otomatiki kunzvimbo yayo yekutanga.
Chimwe chinhu chakanakisa cheicho chinoshanda kudhira pasi makomiki mixer tapu yeWOWOW iyo swivel tap iyo inogona kufambisa mazana matatu madhigirii. Izvi zvinoita kuti aya adonhedze pombi yekusanganisa kicheni kunyanya kwakanakira kukitchen kicheni kunyura. Nenzira iyi zviri nyore kuti uchinje kubva kune imwe kicheni kunyura kune imwe. Zvinonzwa zvakapusa kushanda izvi kudhira mapepa ekitchen mixer tap sezvo WOWOW inoshandisa yakakwirira mhando midziyo yayo yekudonhedza pasi kicheni mixer tap. Cherechedzai musiyano pakarepo kana iwe anoshanda kicheni chisanganiso pombi kuti WOWOW.
3-modhiyo dhiraina komputa inosanganisa tap
Iyo yekudonha pasi kicheni mixer tapu yeWOWOW inogona kushanda neimwe imwe yepamusoro-mhando lever. Mvura inodziya uye inotonhora inogona kusanganiswa neruoko rumwe chete kusvikira tembiricha yakakodzera yasvika. Uye izvo zvinoenderana nehuwandu hwemvura zvakare. Nenzira iyi iwe uchagara wakachengetedza ruoko rumwe rusununguko kuita mamwe mabasa ekicheni. Iyo inodonha-isina ceramic cartridge inovimbisa kushanda kwakanyanya. Nekuda kwekuisa kwavo chisimbiso, iyo lever inotenderera zvakanaka uye inovimbisa kushandiswa kwenguva refu pasina chero kudonhedza mvura kana kubhururuka. Uye pamusoro pezvose, inovimbisawo kudzora uye kusagadzika kwekutonga kwemvura tembiricha pasina kana backlash.
WOWOW kudhira pasi kicheni mixer tapu inopa matatu-anoshanda ekhicheni musanganiswa tap. Kunze kwekungogara yakajairwa nzira yemvura, unogona zvakare kusarudza nzira yekusvina kana yea aqua-blade mode. Iyi aqua-blade mode inokupa iwe yakasimba kwazvo jet yemvura, iyo inogona kusheedzera nyore nyore chikafu chese chemarara kubva pamapuleti kana kicheni ikanyura yega. Iri basa rakasarudzika mumusika uye zvirokwazvo iri mukana wekupusha pasi kicheni mixer tapu yeWOWOW pamusoro peimwe dhonza pasi mukicheni mixer tap. Unogona kungo shandura mabasa emvura kana uchibata bhatani, iro riri nyore kumira pamusoro pemusoro wemupuruti wekiyi musanganiswa wekicheni.
Yakakwirira-mhando dhonza pasi kicheni mixer tap
Sezvambotaurwa, WOWOW inonyatsoziva kukosha kwehunhu dhizaini yekubatanidza mushini wekitoro. Ndokusaka WOWOW inoshandisa yakakwirira-mhando zvigadzirwa izvo zvinopfuura zvakazara indasitiri zviyero. Funga nezve premium pamusoro electroplating maitiro, nyika inozivikanwa mafirita senge Neoperl aerator, uye yakasimba simbi zvinhu. Kungoti iwe uve nechokwadi chekuti iwe ushandise chigadzirwa chakanyanya kuita chekushandisa kwenguva yakareba. Saka WOWOW inogona zvakare kukupa iwe-yemakore matatu chigadzirwa waranti pane yayo yekudonha pasi kicheni mixer tap. Uye pamusoro pezvose, paWOWOW isu tine chokwadi chekuti mucharamba muchidzoka kwatiri, sevatengi vedu vatengi vanogara vakavimbika vatengi kwehupenyu nekuda kweiyo sublime kukosha kwemari yatinopa.
Iyo inobvisa yekugezesa musoro wepamusoro-mhando dhonza kicheni mixer tapu zviri nyore kubvisa kana kutsiva. Nenzira iyi unogona kuchenesa nekuchengetedza musoro wepombi weiyi mixer tap nyore, uye kubvisa zvese zvakaoma mvura yakasara iyo inounganidzwa nguva yekuunganidza. WOWOW kudhira kicheni musanganiswa tapombi inonyanya kukodzera yakakwirira kudzvinyirira masystem. Iyo inoshanduka silika gel yemvura hose saka inopawo kushanda kwakapusa uye moyo murefu durance.
Kuisa dhonza pasi kicheni musanganiswa tap
Iyo yekudhonza pasi kicheni mixer tapu yeWOWOW inogona kuiswa mune 1 kana 3 hole kicheni tafura. Iyo dhiza yakaiswa pasi dhitini yekusanganisa kompu inounzwa nekodhi yekuisa yakakwana. Nesimbi dhiza yakaiswa chifukidziro chakafukidzwa machira ese akafukidzwa, saka iwe unozove unogoneswa neye esthetically yakaiswa dhonza pasi kicheni musanganiswa tap. Kuti ukwanise kuisa aya anodhira pasi musanganiswa wekombiki unopeta iwe pachako, zvese zvinongedzo zvinosanganisirwa muhomwe. Unogona kupedzisa kuisa dhizaini yekubatanidza yekubatanidza svutugadzike sepamhepo. Nevhidhiyo yemusangano iwe unogona nyore kupedzisa kuisirwa mune isingasviki maminitsi makumi matatu. Izvi zvichakupa iwe inodhura pombi!
Kunze kwemakombiyuta matatu-gore waranti yewedzero iyo WOWOW inokupa iwe paunotenga aya anodhira pasi mukomiki mixer tap, WOWOW inokupa iwe nemazuva makumi mapfumbamwe emari-yekudzosa-garandi. Kana iwe usingazove nekufadzwa nekukosha kwemari iyo iwe yaunogamuchira nekutenga aya anodhira pasi kicheni mixer tap, iwe unogona kudzorera iyo yekudonhedza pasi kicheni mixer tap pasina kunetsa. Iwe uchawana zvakakwana mari pasina mibvunzo yakabvunzwa.
Izvo zvakanakira zveku dhonza kicheni mixer tapu mune yakapfupi:
· Ipa wow-chinhu kune chero kicheni
· Yakasarudzika uye yazvino dhizaini
· Mvura matatu modes, kusanganisira yakakura yekudzvanya aqua-blade
· Yakagadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa
· Kusanganisira ita-it-pachako yekuisa kit
· 90-zuva mari-dzosera-garandi
· 3-gore waranti
SKU: 2310800C Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: 1 Horo, Chrome, Dhonzera pasi
Yazvino, Yemazuva ano
Chisanganiso pombi / Matatu ekudzora mvura mabasa
37 anodzokorora nokuti WOWOW Chrome Kicheni Sink Faucet Ne Pull-Out Sprayer
Une izvi kutsiva pombi yedu ipfupi / yakadzika coz tiri kuomerwa nekuwacha mapoto akakwirira / akareba uye zvese zvakanaka ... chinhu choga chandinoshandura ndiko kuiswa kweinopisa uye inotonhorera iyo default inokwevera kwauri kupisa uye ini handidi nezvayo coz ndine vana saka ndakabatanidza hose yebhuruu kune inopisa vharuvhu red hose kune inotonhora vharuvhu..severything zvimwe zvese zvakanaka chaizvo chikuru tenga.
Ndinoda kuchinja pombi yangu yekare yekicheni, mutengo wakanaka, saka ndakatenga pasina kana kuzeza. Iyo yekudhonza-pasi sprayer uye matatu marongero anonakidza! Chibvumirano chinogutsa kwazvo!
Inotaridzika uye inonzwa zvakanaka kwazvo.
Ndichangopedza kuisa pombi mukitchen mangu. Zviri nyore kuisa uye hapana chikonzero chekufonera nyanzvi. Nyore yekudhonza iyo sprayer kamwene pasi uye rega ichidzokera kumusoro mubato. Izvo zvakangoitika kuti kuunganidzwa kwangu kwekugovera kune saizi yakafanana neiyi unit ine. Nezve mutengo wemutengo, zvakanaka kwazvo.
Kuenzanisa pombi iyi ichipesana nemazita makuru saMorn, Delta, nezvimwewo manzwiro uye chitarisiko zvakafanana. Iyi tepi iri nyore kudzora kumanikidza kwemvura uye tembiricha.
Chibvumirano chakanaka uye hunhu hwakaenzana nemapombi anodhura.Takaisa faucet iri pasinki redu rekicheni. Yakanga iri nyore kumisikidza uye yaita zvisina tsananguro kubvira. Iyo yekupedzisira iri nyore kwazvo kuchenesa, inodzivisa kukwenya. Iyo ine yakanaka sprayer yekumisikidza uye iyo sprayer inoshanda kwazvo futi, hapana inodonha kana yakaturika pasi. Tinoda iyi pombi itsva.
Mushure mekuverenga wongororo dzese, ndakafunga kuti tichaedza pombi iyi. Kune iyo $ $ $ zvaiita kunge zvakakodzera mukana. Wow! Isu tinofara kwazvo nepombi iyi. Zvakadaro haugone kutenda mhando yemutengo. Ndingakurudzira pombi iyi kune chero munhu anotarisa kusimudzira kungave pabhajeti kana kwete. Kukosha kukuru, kutaridzika kukuru. Basa rakakura.
Pombi huru yemutengo mukuru! Ini ndakatenga pombi kuna tezvara vangu nguva pfupi yadarika kubva kune hombe bhokisi rehardware chitoro kweanenge kaviri mutengo wemubhedha uyu. Ini ndinogona zvirokwazvo kupupura kuti mhando yeiyi faucet uye nyore kuisa yange iri nani pane yapfuura iya yandakatenga. Iyo inouya nemitsetse yemvura - gara uchitsiva yako mitsara yemvura !!! Zvakare kubatanidza kwehuremu kwaive nyore kuisa. Pakazara anofara kwazvo nepombi.
Imba yangu iri kugadziridzwa, saka ini ndoda iyi pombi. Inomiswa mashoma ezuva rapfuura. Inoshanda sezvanga zvichitarisirwa. Hapana chekunyunyuta nezvazvo Icho chigadzirwa chiri nyore asi chinoshanda kwazvo! Inosunungura chaiyo nzvimbo yakawanda pakaunda kana ini ndichingoda kusuka ndiro kana maviri kana yezvinhu zvisiri zvekushambidza mbichana.
Ini ndaive ndisina chokwadi pamutengo uye chokwadi chaive chisiri chikuru zita zita. Ini ndinogara ndichivhunduka zvakachipa pombi dzemapombi dzakabatana dzinotyoka, nekuti iwe uchashandisa zviuru kugadzirisa kukanganisa kuti imwe yekuwedzera $ 20 kana $ 30 chigadzirwa chingadai chakachengetedza. Nekudaro, ichi chigadzirwa chakakura! Yangu yekare American Standard brand faucet yakaputsika pamutsipa wakakoshwa, kubva kune ngura. Iyo gasket inofanira kunge yanga ichidonha kwenguva yakati, uye zvimisikidzo zvakabviswa pandiri futi. Ndakapedzisira ndave kucheka mitsara yemvura yekare uye kutyora pombi yaive yasara kuti ibudise. Icho chaive rudzi rwekurota, uye aive achitarisira kuti zvaisafanofananidzira izvo zvandaive ndoda kutsungirira. Asi yakanga isiri. Kuisa izvi kwaifamba nechikepe uye nyore. Singi rangu rine matatu ekugadzika saka ndakashandisa ndiro yepasi. Ndinoda mahwendefa epasi furo gasket pane epurasitiki matete aunowanzo kuwana. Ndichiri kupuruzira zvinhu pasi iwe unogona kuona furo ichinyatso chisimbisa zvinhu kumusoro uye kunyangarika kubva pakuona. Ndine chokwadi chekuti izvi hazvizoite ngura senge yangu yekare. Ini ndinodawo kupedzisa, haina kushambadza iine nzvimbo inoshingirira asi haina kunyatso kuwana nzvimbo dzemvura kana zvigunwe. Zvichida nekuti haina Stainless uye kwete nickel? Handina chokwadi, asi izvo zvaive zvakanaka kuona uye kusatarisika panguva ino yemutengo.
Kunetsekana chete kwandinako ndokwandinodhonzera pasi muromo kuti ndigeze ndiro gomba pombi / sinki zvishoma. Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nesinki yangu iri mutete isina tsvina zvakare. Ini handina hukasha pazvinhu zvangu saka handisi kunyanya kunetsekana asi chinhu chandino chengeta kumashure kwepfungwa dzangu kana ndichiita ndiro. (Chenjera kungoitika.)
Ini ndinokurudzira izvi kune chero munhu! Sei kushandisa $ 100… $ 150… $ 200 pombi pabhokisi muhombe bhokisi chitoro kana iwe uchigona kuwana izvi nechikamu chemutengo?
Ndisati ndatenga ichi chigadzirwa, ndakaverenga yenhamba yemaonero nezve zvakashata zvakaitika kubva kune vamwe vatengi vakaunza chigadzirwa ichi. Nekudaro, ndakafunga kuyedza uye kusvika parizvino (mazuva matatu chete ekushandisa) zvese zviri kushanda mushe pasina kana chabuda.
Ini ndichabvuma, ndakanetseka nekumisikidza zvishoma, asi iyo yakanga isiri mhaka yechigadzirwa ichi. Iwo iwo mirairo yaive yakajeka kwazvo, ini ndaingova nehusiku hwekubvisa pombi dzangu dzekare dzabviswa uye kubviswa. Pane imwe nguva ndakapfuura icho chipingamupinyi, iyo nyowani yekumisikidza pombi yakanga iri nyore kwazvo.
Kusvika pakuita, iro rakapamhamha pfapfaidzo musoro une simba rakawanda kwandiri. Nekudaro, kumanikidza pane iyo "rwizi" marongero anoita kunge akaderera. Ini handizive kana iri nyaya iri pombi kana pombi yangu yemvura. Chero nzira, hachisi chinhu chakanyanya kunetsa sezvo ini ndichisarudza kuichengeta pane yakafara piritsi kurongedza chero nzira.
Chero zvadzo, pazvese ini ndakayera chigadzirwa ichi zvakanyanya nekuda kwekukosha, kuiswa kuri nyore, uye kutaridzika kukuru. Kana ini ndiine chero matambudziko mune ramangwana, ini ndichagadzirisa yangu yekudzokorora kuiratidzira nezvakagadziridzwa.
Kana iwe urikurenda nzvimbo iyi inzira huru yekukwidziridza kubva kune yakajairika pombi yekunyudza iyo kazhinji isiri yakanaka iyo inouya nemaroja. Unogona kudzosera pombi yekare usati waenda. Faucet iyi yaive, yakapusa kupinza mukati, zvakatora hubby pasina kana nguva zvachose. Sink yedu yaiuya nekitchen yanga isina sprayer nekapfupi kapfupi kaigara padhuze nepakati pesink saka kunyangwe dai singi raingova nendiro mbiri mukati maro, zvainetsa kusuka. Iyi tepi inokwidza WAY yepamusoro ichitipa imwe nzvimbo yakawanda, uyezve ine sprayer iyo inofanirwa kuve muyero wepombi dzose / inonyura munguva dzazvino. Chaizvoizvo waive wekuchinja mutambo, wakaitwa kuchenesa nyore, uye zviri nyore kudzima kana tikabuda kunze kwekurenda kwedu uye tichida dhipoziti yedu kudzoka.
Wakatenga izvi kuti ubudise pamusoro peimwe kukwidziridzwa kune yekurenda.
Kazhinji idzi mhando dzekudhonza pasi mapombi ndeye $ 100 + kubva kumba uye Lowes saka ndaive ndisina chokwadi izvi zvingave zvemhando yepamusoro.
Ndinofanira kutaura kuti ndakanakidzwa nehunhu hwemari, huremu hwacho hwakawanda kukwezva pombi kuti idzokere mukati. Iwo ma modes maviri anoshanda zvisingaite asi bhatani rekumbomira rine zvimwe zvaro kukanda kuti ndinzwe kutsigira kumanikidza kupinda mapaipi asi hazvina kukwana kuti ndiri kunetsekana nazvo.
Iyo simbi yekuvaka inonakidza kwazvo panguva ino yemutengo uye hapana zvikamu zvinonzwa kusimba.
Kuisirwa kuri nyore, chete chinonetsa chikamu ndechezvikorekedzo zvinosungira chisimbiso pasi pesingi. Kana iwe uine yakagadziriswa screwdriver kana isina huremu chibooreso saka iyi haisi yakawanda nyaya.
Pakazara ichi chinhu chandichatarisa kuti nditengezve kune mamwe ma rentals ndichifunga kuti iyi inomira muyedzo wenguva!
Yakatengwa yechipiri yeimwe unit, kuisirwa kwaive kwakapfava uye kwakatora anenge makumi matatu nemakumi matatu nechisimba chibhorani kusimbisa sikuruu dzinosimudza pasi pesingi.
Sink yedu haina kudzika uye ini ndaida nzira iri nyore yekuzadza hari. Ini ndinofarira chaizvo kuti ine maviri marongero- rwizi uye pfapfaidzo! Ini ndakaisa izvi (zvine zvinokanganisa) zvakanaka pasi peawa. Koko inokiya ine yakavhurika iyo inobvumidza kuti ienderere mberi pasina kuiswededza iyo hoses. Chimwe chinhu chakanaka chekuisa ndeye hoses anoiswa bhuruu uye tsvuku, ichigadzira hookup mhepo. Ndanga ndichitarisa kumabhokisi ezvitoro zverudzi urwu rwefaucet. Iyo mitengo yezvikamu zvakafanana yaisundira miganho yebhajeti yangu. Bhegi iri rine zvese zvandaida uye rakasimba rakagadzirwa chigadzirwa. Mutengo mukuru, pombi huru uye ndiri kufara kuti ndakatenga izvi!
Ini ndinoda bhegi iri nyore kuisa rinoshanda zvakakwana zvakakwana pane yangu isina kupera kicheni singi mutengo mukuru ungade kutenga imwe sechipo.
Bhegi iri raiitirwa kupfeka kicheni chenguva pfupi apo isu tichigadzirisa edu. Isu tinochida zvakanyanya zvekuti tiri kuzoshandisa munzvimbo nyowani. Yakasimba kwazvo, kuvakwa kwemhando yepamusoro, hapana mapurasitiki. Yakareba zvakakwana, iri nyore kwazvo kuisa, nyore kushandisa, ine mukana wakanaka wekushanduka kubva pombi yemumvura. Uye zvese zvechikamu chidiki chemutengo we "zita" mabrandi, ayo anowanzo gadzirwa nemapurasitiki mazhinji. Yakanaka faucet yeiyo $ $.
Ndakanga ndichinetseka zvishoma zvaizoita senge “purasitiki yakachipa” asi hazviite! Ndiri kudzorerazve kicheni yangu uye pombi inoratidzika kunge yakanaka !!! Ini ndinoda kuti ndinogona kuchinja kumanikidza kwemvura uye kunyange kumbomira kuyerera kwemvura kana ndichisesa kumusoro kwemidziyo iyo inochengetedza mvura nemari pabhiri rangu remvura. Ndine singi mbiri saka yakakura uye iri nyore.
Uku kwaive kutenga kwakanaka kwazvo. Izvo zvaive chaizvo chaizvo zviri nyore kuisa. Chikamu chakaomesesa chaive chekubvisa iyo yekupedzisira fesheni sezvo yaive yachembera uye yakakomba. Asi chigadzikiso ichi chaive chakatsetseka, chiri nyore kuisa pamwe, uye pamwe chakanditora ingangoita hafu yeawa zvakanyanya, kusanganisira kuchenesa, kuti chinhu chose chishandurwe. Chaizvoizvo kufadzwa nekureruka kwekushandisa uye kugona kuchinjika kubva kupisa kusvika kuchitonhora, kupuruzira basa, uye kutambanudza. Iko kurema bhora kwakangwara. Ida hunyanzvi uhu uye mashandisiro atinoita ari nani uye anodhura mwero wehupenyu.
Yakanyanya kufadzwa neyuniti. Kupedza kwakanaka. Chinhu chega chandinoda kuti nditaure nezvacho mubato wakanyanya uye munhu anofanirwa kungwarira paanobatidza pombi sezvo iwe uchigona kuwana simba shoma kupfuura raunoda. Zvikasadaro ndinoshamiswa nekambani uye nekutevera kwavakaita pane yavo chigadzirwa. Unogona kuzotengazve kana zvichizodiwa.
Ndinoda pombi yangu nyowani! Ndakaiisa nezuro manheru. Izvo zvaive zvisina kunyanya kuoma kunze kwekubatanidza mitsara yemvura kune yakasimbiswa. Kana uchikwanisa, tanidza usati waisa pombi panzvimbo. Yangu yanga yakanyanya kunetsa kuita nekuti nzvimbo yaive pasi pesink yangu yakamanikana. Zvimwe kunze kweizvozvo zvakafamba mushe uye ndiri kuda pombi nyowani!
Ndiri kufara kwazvo nechigadzirwa ichi. Zvaive nyore kuisa. Tine vana vadiki uye zviri nyore kwazvo kuti vashandise, zvakare. Isuwo takatevera rairo yemumwe muongorori uye takachinjisa iyo inopisa / inotonhorera kubatana kuti iyo inopisa ive yekusundira kumashure uye kutonhora kukwevera kumberi. Inoshanda zvikuru uye ndinogona kukurudzira chigadzirwa ichi !!
Ndanga ndichida kutsiva pombi yangu yakare mukicheni kwechinguva ikozvino. Iyi seti yakanakisa uye inoshanda nemazvo! Chakanga chiri chidiki chinonyengera kufambisa iyo yekuisa (kunyanya iyo chikamu pandakanga ndichifanira kumisikidza pasink basin - ndakaguma ndave kukumbira mumwe munhu rubatsiro), asi ini ndakazoiwana uye pombi inoshanda kwazvo! Ini ndinoda iyo inodzoserwa pombi yemusoro yekumwaya bhesheni bhesheni. Iyo seti yakauya nekaviri chena donje magurovhosi kunyangwe isina kunyatso chokwadi kuti izvo zvaive zvei. Iko kurongedza kwaive kwakanaka kwazvo, uye ini ndaive kutenderedza ndichifara kwazvo nekutenga kwangu!
Ini chaizvo ndaisatarisira kuti tepi pamutengo uyu ichave iri yakanaka. Ndiri kuona vamwe vanhu vachinyunyuta nezve plastiki inonzwa yezvinhu. izvo zvinhu hazvinzwe zvakasarudzika asi ndozvatinogona kutarisira kune chigadzirwa pamutengo uyu. Izvo zvinhu zvinonzwa senge isina simbi asi chakareruka kupfuura icho. Inguva chete ndiyo inogona kupindura kana yakasimba. Pombi ine musoro unotambanuka senge mamwe mapombi asi ini ndinofunga havana kushandisa chitubu kuti musoro usadzore nekukurumidza sevamwe. Nekudaro, ichiri kushanda mushe. Chigadzirwa chakasvika chiri chakakwana mamiriro, kurongedza kwaive kwakanaka. Yakanyanya kurudzira kana iwe uchitsvaga yakachipa pombi!
Ini ndakangotamira mumusha mutsva uye singi yekubikira yekicheni yakanga yasakara uye kukwenya kumusoro uye ngura. Mushure mekunge ndapenda, ndakaisa iri pombi nyowani. Inozvipa kutaridzika kwemazuva ano uye ini ndoda iyo yekudhonza pasi sprayer. Zvaive nyore kuisa (ingo tevera iwo mafambiro).
Izvi zvese zvinotaridzika uye zvese zvinoshanda. Inonakidza kwazvo futi. Kuenda kubva kune yakajairwa chrome kupera, maviri mubato, yakadzika mutsipa kicheni pombi kune chakatarisana kunofadza! Mutengo unokwikwidza. Zviri nyore kufambisa. Anofara kwazvo nekutenga uku.
rakanaka, rinoshanda zvakanaka pombi
Inoshanda zvikuru. Unotyisa kukosha kwemutengo. Ndanga ndichida kuchinja pombi yedu zvachose uye iyi inoshanda uye inotaridzika zvakanaka. Sprayer haina dangle. Ingo ita shuwa kuti iwe une pakaunda uremu wakamira zvakanaka.
Iyo faucet chigadzirwa chakanaka. Zviri nyore kuisa kana chimiro chesinki yako chiri nyore kushanda nayo. Kwandiri, ndinofanira kurara pasi kuti ndiiise. Asi zvakakosha.
Ini ndaizofanira kutaura pamutengo wandanga ndisina chokwadi nawo nezvekutenga izvi asi ndine chokwadi chekufara kuti ndakaita zvaive nyore kuisa mabasa chaizvo sezvaitarisirwa uye zvainge zvakangonaka semapombi ako ekupedzisira uye ndinofanira kuti usanyora wongororo zvakanyanya nekuti ini ndinokanganwa saka kana ndiri kutora nguva yekunyora izvi zvinongoreva kuti zvainge zvakakosha uye ini ndaida kuti vamwe vanhu pabhajeti vaone zvakanaka kuti vasaputse bhanga vachiri kugadzirisa imba yako
Mutengo mukuru wepombi yakanaka. Ini ndinoda chaizvo "kumbomira" chimiro. Zvaive nyore kuisa. Iyi ndiyo pombi yechipiri yandakatora kubva kukambani iyi, uye vese vari vaviri vakanaka!
Yakanaka pombi yemari. Yakareruka gadza, yaisada mapombi epombi, uye hapana kuvuza. Tiri kutarisa kufamba mukati megore uye uku kwaive kukwidziridzwa kwakachipa kwekicheni
Ndakaverenga wongororo uye ndikatora mukana uye ndine chokwadi chekufara zvandakaita, ichi chaive chiitiko chinotyisa chekicheni yedu uye mutengo hautendeseke uchienzaniswa nemabhokisi makuru ezvitoro.
Chaizvoizvo kutenga kwakanaka. Inoita seinodhura chaiyo, yakasarudzika uye inosimudza kicheni. Kuwedzera kwacho kunoshamisa. Ida kupera. Amai vangu vaida izvi uye vanopfuura kugutsikana.
Izvo chaizvo izvo zvakadzika mbichana mbichana zvaida. Nyore yekuisa chete maturusi ndiyo inogadziriswa wrench. Phillips mutyairi. Yakasungirirwa hapana kudonha uye yakafara inofara.
Pombi iyi yakadzosa kicheni yangu kuupenyu! Yakagadzirwa uye yakapusa kuisa! Ndakave nekubuda zero kana nyaya kusvika parizvino! Ndinokurudzira!
Ndinoda pombi yangu nyowani ndakatenga 2 imwe yeimba yangu uye imwe yeimba yangu. Vanotaridzika vakakura uye vanoshanda awsome!
Zviri nyore kuisa, zvaisanganisira zvese zvaunoda. Kukosha kukuru kwemari, usarega mutengo wakaderera uchikuita kuti utye!
Isu tiri munhu chaiye asina imwe yekuwedzera pombi senge mvura yekuchenesa system -iyo nyore kuisa. Ini zvakare ndine shefu munzira kuti huremu haugone kuenda kwazviri chaizvo ita shuwa kuti uri pasi pekushambidza kwako zviri pachena zvinoita kuti zvive nyore kushanda. Bhegi rinotetepa rinotaridzika uye rakagadzirwa zvakanaka. Ini ndinochida kwazvo
Ndakatenga pombi iyi kuti ndivandudze sinki yangu yekubikira. Ndakabhadhara mumwe munhu kuti ndiisere izvo zvandiri kufara kuti ndakaita. Ini ndinotenga arounde. Akanaka Faucets.